Gịnị bụ iwu Ọnọdụ nke Kratom na Illinois na 2014?
Ihe site Lyndon Reys	 1 Comment
Kratom bụ eke ogwu na e na-a otutu nke bu na ọtụtụ US na-ekwu. Ọtụtụ ndị nọ na-atụgharị uche Illinois ma ha kwuo ga-ekwe ka ha na-uru nke-eji nke a ukwuu achụso ogwu. Maka ugbu a, ntụ ntụ na wepụ forms of Kratom ka dị na Illinois, na gọọmenti etiti ka weere ndị a iche nke na umi na-iwu. Nke ahụ pụtara na ọ dịghị mkpa bụ obodo nke na Illinois na ị nọ na-Chicago ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ-ị ka nwere ike ịzụta ma jiri Kratom. Isiokwu a ga-aza ndị iwu akụkụ nke Kratom ngwaahịa na-enye nghọta na-esi na-azụta ihe ogwu na ọnọdụ gị.
tii anọgide na-arụ
onunu ogwu Guide
Red vs. White vs. green akpata nsogbu
Kratom ntụ ntụ
Opiate ndọrọ ego
Kratom Iwu na Illinois
Ọ na-ọ na anya Kratom bụ iwu na Illinois, a ala mara maka nkà ihe ọmụma nke nnwere onwe. Ugbu a, e nwere ihe bụghị otu iwu nlekota ma ọ bụ na-egbochi na ojiji nke osisi na-eji ya emepụta. E nweghị ndị na ókè na ole nke umi nwere ike zụta, na e nweghị okwu nke na-agbalị ịmanye iwu na ojiji nke ogwu n'ọdịnihu dị nso - dịkarịa ala n'ogo steti. On gọọmenti etiti larịị, e nwere agha na FDA na-achọ igbochi America ịbụ ike iji a ogwu, ma n'ihi na ugbu a, ọ bụ iwu na-achịkwaghị achịkwa.
Nke a pụtara na ị pụrụ ịzụta, nwere on stash, na-eri ihe dị ukwuu Kratom dị ka ị chọrọ. Gịnị mere ọ bụghị ya otú a ebe ọ bụ na Kratom bụ eke ogwu na ọtụtụ ọtụtụ mmetụta bara uru? Ahịa ịja mma banyere otú a ogwu ka ukwuu mma ahụ ike ha na ikike ịnụ ụtọ ndụ ha. Ndị mmadụ na-eji ya na-ibe ha ume, iji dochie mgbu, ka ha tinye uche, iji dochie nchegbu, na mbuso ịda mbà n'obi. Ọ na-ọbụna na-eji na-enyere wean ọgwụ ọjọọ riri ahụ anya nke ihe mgbu ọgwụ na ndị ọzọ opiate bekee site easing ịkwụsị ịṅụ.
Kratom na FDA
Eleghị anya ị na-agaghị enweta ihe ọmụma zuru ezu ma ọ bụ ojiji ozi si n'ebe unu ịzụta ya. Nke a bụ n'ihi na e nwere ụfọdụ FDA ụkpụrụ ebe mmachibido ebe na-ere Kratom. Ugbu a, Kratom na-adịghị atụle ihe FDA-mma umi. Ma ọ ga-abụ maka a mgbe n'ihi mmachi ahịa ahụ maka ngwaahịa na enweghi $100 nde dị ka aka na-FDA ihu ọma usoro.
N'agbanyeghị nwapụtaworo na ihe àmà nke ogwu si irè, ọ dịghị onye pụrụ ere ngwaahịa na-anya isi banyere ya ike uru ebe ọ bụ na FDA agaghị ekwe ka Kratom na-advertised dị ka a na-eri mere maka ụmụ mmadụ na oriri. Ya mere ugbu a ka, ọ nwere na-ahịa dị ka a nnyocha onyinye ma ọ bụ ethnobotanical umi ebe ọ bụ na-apụghị aha dị ka a iwesa umi. Otú ọ dị, a ka na-adịghị ka ndị mmadụ ghara iji ogwu dị ka ha na-ahụ ihe kwesịrị ekwesị.
Ebe ịzụta Kratom na Illinois
Kratom a na-eresị ke ntụ ntụ, wepụ, na Capsule ụdị ke ọtụtụ ahịa na anwụrụ ọkụ ụlọ ahịa na Illinois. Ị nwere ike Google ịchọ Kratom na eleghị anya ịhụ a na-ere ákwà na gị onwe gị obi. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ụda dị ezi echiche na-enwe isi ụlọ ahịa ma ọ bụ obodo na-ere ahịa nọ n'ógbè gị, anyị adịghị ndụmọdụ gị na-aga na-aga n'ihi na ị pụrụ imesị akwụ oké price na mpaghara na-ere. A bụ ihe mere…
Ịtụ ya Online
Ọtụtụ Chicago ebe na-echekwa na-ere Kratom site akwukwo na n'etiti $5 - $15 kwa dose ebe ha ihe ike ọzọ na "iwu elu" ìgwè mmadụ ahụ na-enwe elu-efefe n'elu ruru ka akwụ ụgwọ nke na-agba ọsọ a anụ ahụ ụlọ ahịa. Online, ị nwere ike ịtụ otu ihe na a budata ala price kwa dose (dị ka $0.50 ka $2.00). Brand aha OPMs Kratom capsules ere na abụọ ọgwụ n'ihi $15.95 na-echekwa. Ị nwere ike nweta otu ego ọzọ ika maka naanị otu akụkụ nke ihe price online. Ọ bụrụ na ị zụọ ihe n'ùkwù, i nwere ike ịhụ ọbụna dị ọnụ ala karịa amụọ echere gị na internet
Ị na-enwe nsogbu banyere ihe na-stale na B-ọkwa ngwaahịa mgbe ị ịzụta si a Obodo ụlọ ahịa, nke ga-ọzọ ma ọ bụ na-erughị nwere a dịtụ mmachi nhọrọ nke Kratom iche. N'ógbè na-echekwa bụ nanị mmasị na-agbalị na-ere a ika aha. Ha na-anaghị agbalị iru elu àgwà Kratom si reputable ugbo na Asia. Ọ bụ ya mere anyị nwere ike ikwu na-eduzi ndị mmadụ online botanical mgbere ndị ipuiche a ogwu na-enye mma ngwaahịa na-enweghị niile ika aha mama. A otutu ụlọ ọrụ ndị na-enye ma ọ bụ free belata mbupu udu ka Illinois ma ị nwere ike na-atụ anya gị ngwugwu na-abata na Chicago n'ime ụbọchị. The na-eri nke Kratom na-nnọọ ala dabere na otú ọtụtụ grams nke ntụ ntụ ị na-eji na-aga n'ihu na-adabere.
kwuru 3 afọ ndị gara aga
Does this kratom REALLY work for serious opiate withdrawal?
Nkwado Usoro * 5+0=?
Kratom Crazy: Nke A Ọ Bụ ere pụrụ ịtụkwasị obi na-Zụrụ Site?
Ọ Kratom iwu na Arizona? Olee ebe ị pụrụ ịzụta ya?
top 10 Ezi na-ezighị ezi na Kratom Mmetụta
Kratom maka Opiate Isepụ - The Kasị Ike Agwọ E Nwere
Maeng Da Kratom: Mmetụta, Mmetụta na Dosages